सन्तानलाई डेब्यु गराउन हतारोमा कलाकार, प्रतिष्पर्धा की संयोग ! :Nepali Website
सन्तानलाई डेब्यु गराउन हतारोमा कलाकार, प्रतिष्पर्धा की संयोग !
May 26, 2018 3:13 pm Nepaliwebsite
काठमाडौं /नेपाली वेबसाइट – नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पछिल्लो समय पुरान कलाकार भन्दा नयाँ कलाकारहरुको चर्चा बढि चल्ने गरेको छ। त्यसमा पनि पुराना पुस्ताका कलाकारहरुका सन्तानहरुको डेब्युले भने अझ धेरै चर्चा र परिचर्चा पाईरहेको हुन्छ।
यस्तै बिषय बनेको छ यतिबेला पुराना कलाकारहरुका सन्तानको फिल्म क्षेत्रमा डेब्यु। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । करिष्मा मानन्धर, शिव श्रेष्ठ र झरना थापा।
केही समय अघि सम्म आफ्नै होम प्रोडक्सनको फिल्ममा अभिनय गराउने भन्ने गरेकी करिष्माले आफ्निी छोरि कविता मानन्धरलाई फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’मा डेब्युका लागि अनुमति दिईन्। करिष्माकी छोरि सँगै अभिनेता शिव श्रेष्ठका छोरा शक्ति श्रेष्ठले पनि एक साथ डेब्यु गर्ने भए।
त्यस्तै फिल्म ए मेरो हजुर ३का लागि झरना थापाले आफ्नै छोरि सुहाना थापालाई फिल्ममा ल्याउने निधो गरेकी छन्। सुहानाको अपोजिटमा भने भुवन केशीका छोरा युवा स्टार अनमोल देखिने छन् ।
जीवनका अमुल्य समयहरु फिल्म क्षेत्रमा बिताएका कलाकारहरुका छोराछोरिहरुमा पनि फिल्म मोह नहुने कुरै भएन । दर्शक हरुको माया, पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त प्रतिष्ठा , देश बिदेशको यात्रा, रिवन काट्ने देखी सभा समारोहमा पाउने सम्मान सम्पुर्ण करा एउटा कलाकारले स–सम्मान पाउने गर्दछ।
यही कारणले हुन सक्छ कलाकारका छोरा छोरिहरु पनि फिल्म क्षेत्रमानै तानिएका। तर एक पछि अर्को गर्दै पुराना कालकारका सन्तालने नवनायक नायिकाका रुपमा फिल्म क्षेत्रमा डेब्युको लर्को लाग्दा दर्शक पनि चकित भएका होलान् ।
के फिल्ममा पुराना कालकारहरु आफ्ना सन्तानलाई अभिनय गराउन लालाहित भएका हुन् वा प्रतिष्पर्धी भावनाको उपज हो? वा संयोगमात्र हो ? यी प्रश्नको जवाफ भने समयले बताउनेनै छ। उनिहरुको अभिनय क्षमता, प्रश्तुती र दर्शकको बिष्लेशणले पनि डेब्युको अर्थ खुलाउने छ।